Avereno jerena ny mailaka an'ny Outlook avy amin'ny Drives & Disks
DataNumen Outlook Drive Recovery dia fitaovana matanjaka hamerenana ireo mailaka Outlook sy zavatra hafa avy amin'ny kapila sy kapila mivantana. Raha mbola mitahiry rakitra Outlook PST amin'ny kapila eo an-toerana na kapila taloha ianao, dia na inona na inona antony tsy ahafahanao miditra amin'ny angon-drakitra Outlook dia azonao atao foana ny mampiasa an'io fitaovana mazika io hamerenana aminao ny angona ho anao.
Fanamarihana: Raha mbola misy eo amin'ny kapilao na ny kapilao ny rakitra Outlook PST dia ampiasao azafady DataNumen Outlook Repair hamerenana ireo mailaka sy zavatra hafa ao amin'ny fisie PST.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,627)
Nahoana DataNumen Outlook Drive Recovery?
Vahaolana amin'ny fanarahana tranga mahazatra:
Fafao ireo rakitra Outlook .pst ary avy eo esory tsy mety ny Recycle Bin.
Fafao tsy mandeha tampoka ireo rakitra Outlook .pst.
Diso ny famolavolana ny drive izay misy ireo fisie Outlook .pst.
Hamafa ny fisarahana misy ireo rakitra Outlook .pst tsy nahy.
Zarao indray ny fizarazarana ny kapila noho ny tsy izy sy ny lost ny kapila misy ireo rakitra .pst.
Tsy afaka mamaky kapila na kapila misy ireo rakitra .pst noho ny tsy fahombiazan'ny fitaovana.
Ny kapila na kapila misy ireo fisie pst dia tsy tokony ho starTed na fantatra noho ny kolikoly ao amin'ny MBR, latabatra fisarahana na antony hafa.
Ho an'ireo tranga rehetra voalaza etsy ambony, ary tranga hafa mety tsy hahafahanao miditra amin'ny angona Outlook voatahiry ao anaty kapila anao na kapila ao an-toerana dia azonao atao foana ny mampiasa DataNumen Outlook Drive Recovery.
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Outlook Drive Recovery v8.5
Fanohanana hamoronana rakitra PST raikitra amin'ny endrika Outlook 97-2002 sy endrika Outlook 2003-2016.
mampiasa DataNumen Outlook Drive Recovery hamerina ny angona Outlook
Raha mbola mitahiry ny angon-drakitra Outlook amin'ny kapilao na kapilao ianao, dia na inona na inona antony tsy azonao alaina na idirana ny angon-drakitrao Outlook dia azonao ampiasaina foana DataNumen Outlook Drive Recovery hamerenana ireo mailaka Outlook sy zavatra hafa avy amin'ny kapila na kapila ho anao.
NAOTY: REHEFA MISY ATAON'ILAY TALOHA DATA AO AMIN'NY DATA OUTLOOK ANAO ATY DRIVE SOURCE NA DISK, AZA MANORATRA NA MANOVA DATY IZAY MITONDRA AZY ATAO ATAO. DODR IHANY NO HAMAKY NY DATA AVY AMIN'IZANY DRIVE NA DISK IZAO ARY TSY MBA HANORATRA NA HANOVA DATRA IZAO!
Fanamarihana: Alohan'ny fanarenana dia akatony azafady ny Microsoft Outlook sy ireo rindranasa hafa
Raha toa ka misy ny lozika drive izay misy ny rakitra Outlook pst dia voatahiry ary mbola tsy niova ny habeny na ny toerana misy azy dia safidio azafady mba hamindra izany kapila izany:
Raha tsy izany, raha tsy misy intsony ny kapila lojika, noho ny fizarazaran'ilay kapila indray, lost ny MBR na fampahalalana momba ny fizarazarana, na ny antony hafa, na ny lozika drive dia averina habe na afindra amin'ny fitaovana fizarazarana toy ny Partition Magic, dia tokony hametraka ny kapila mangirana manontolo ianao amin'ny fitehirizana ireo rakitra pst ho toy ny kapila loharano hakana scan:
Raha mampiditra na mivoaka kapila azo esorina ao amin'ny solosainao ianao aorian'ny DataNumen Outlook Drive Recovery dia natomboka, dia azonao atao ny manindry ny bokotra hamelombelona ny lisitry ny kapila sy ny kapila ao amin'ny boaty combo.
Raha fantatrao fa ho azo averina ny kinova an'ny loharanom-baovao Outlook, dia azonao atao ny manondro azy ao anaty boaty combo eo akaikin'ny boaty na boaty combo drive. Raha avelanao ho "Auto Determined" ilay format, dia DataNumen Outlook Drive Recovery Hizaha maso ny angon-drakitra Outlook hamaritana ny endriny ho azy. Na izany aza, mila fotoana fanampiny izany.
Azafady mba farito ny anaran'ny rakitra napetraka. Mandritra ny fizotry ny fanarenana, DataNumen Outlook Drive Recovery dia hamerina ny angon-drakitra Outlook rehetra avy amin'ny kapila na ny fiara nisafidy anao, avy eo tahirizo ao anaty rakitra vaovao miaraka amin'ity anarana ity ny angona azo.
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny rakitra apetraka na mikitika ny bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra.
FANAMARIHANA: HITORIANA NY FAMONJENA NY DATA OUTLOOK ANAO AMIN'NY DRIVE SOURCE NA DISK, AZA MITSIDA NY ANARANA FAILE FAFITSARANA AVY AMIN'NY DRIVE SOURCE NA DISK.
Azonao atao koa ny manondro ny endrika fisehoan'ny rakitra ao amin'ny boaty combo . Raha avelanao ho "Auto Determined" ilay format, dia DataNumen Outlook Drive Recovery dia hamoaka rakitra raikitra mifanaraka amin'ny kinovan'ny Outlook napetraka ao amin'ny solosainao.
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Outlook Drive Recovery start fitiliana ny kapila na kapila voafantina, ary fanarenana mailaka sy zavatra hafa avy ao aminy. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanarenana, raha misy angona azo averina soa aman-tsara avy amin'ny kapila na kapila dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ianao dia afaka manokatra ny fisie PST raikitra amin'ny Microsoft Outlook. Hie ny lahatahiry manontolorarchy dia haverina haverina ao anaty rakitra PST raikitra ary ny zavatra azo averina ary apetraka amin'ny lahatahiry voalohany. Ho an'ny lost & zavatra hita, hapetraka ao anaty lahatahiry toy ny Recovered_Group1, Recovered_Group2, sns.
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.5 dia navoaka tamin'ny 18 Febroary 2021
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.8 dia navoaka tamin'ny 24 Desambra 2020
DataNumen Outlook Drive Recovery Navoaka tamin'ny 7.6 Novambra 7 ny 2020
DataNumen Outlook Drive Recovery 2.0 dia navoaka tamin'ny 5 Febroary 2014
Tohano ny Outlook 2013.
DataNumen Outlook Drive Recovery 1.5 dia navoaka tamin'ny 15 Desambra 2010
Hatsarao ny fikajiana ny lesoka, ny fanodinana ary ny tatitra.